Mobile Ads - izvi hazvisi mabhenji kushambadzira ekare. Anhasi mafoni ekushambadzira mapuratifomu anosunda kushambadzira zvinoenderana nekukosha, nzvimbo uye nguva… zvichiita kuti zvive nyore kuti kushambadza kwako kuonekwe nemunhu chaiye, panzvimbo chaipo uye panguva yakakodzera.
QR Makodhi - haiwa ndinokusema sei… asi zvichiri kushanda. Mafoni eMicrosoft anoaverenga pasina kushandisa Anwendung uye mabhizinesi mazhinji anoona yakanyanya kuregererwa mitengo - kunyanya kana uchimanikidza mumwe munhu kubva kudhinda kuenda online. Usavadzinga izvozvi.
Mobile Commerce (mCommerce) - kungave kutenga kuburikidza nemeseji meseji, nharembozha, kana iri kuuya kuitiswa padyo nemunda kutaurirana, vanhu vari kuita sarudzo yekutenga kubva kune yavo nhare mbozha. Vanogona kutenga kubva kune yako here?
Mobile Applications - ini ndanga ndisina tarisiro yakanyanya nezve nharembozha maapp ... Asi vanhu vanoda maapplication avo, uye ivo vanofarira kutsvagisa, kutsvaga, uye kutenga kubva kumabhureki avanoita bhizinesi nawo kuburikidza navo. Regedza chikumbiro chinomanikidza, masevhisi enzvimbo uye midhiya enhau pamusoro peyako nharembozha uye uchaona nhamba dzichikwira. Ive neshuwa yekumisikidza iyo SDK kune yako yaunoda analytics chikuva kuti uwane nzwisiso yaunoda!
mahwendefa - zvakanaka, handifarire kuti mapundu aro ane nharembozha… asi nekuda kwemaapplication uye mabhurawuza, ndinofungidzira iwo akati siyanei. Nekukura kunoshamisa kwePadad, Kindle, Nook uye iri kuuya yeMicrosoft Surface, mapiritsi ave kuita iyo yechipiri chidzitiro vanhu vari kushandisa vachiona terevhizheni kana kuverenga muchimbuzi (eww). Kana iwe usina swipey piritsi app (seyedu mutengi Zmags) iyo inotora mukana weakasarudzika mushandisi ruzivo piritsi inogona kukupa, urikushayikwa.
Mazhinji makambani haafunge kuti zvigadzirwa zvavo kana masevhisi ari kumanikidza zvakakwana kuendesa nhare mbozha kutenderedza. Ini ndichapa muenzaniso wakanaka wekambani ine inoshamisa mobile app mune indasitiri yaungangofunga ... Behr. Behr yakaendesa a RuvaraSmart application yeserura izvo zvinokutendera kuti utarise kusanganisa kwemavara, kuenzanisa ruvara uchishandisa yako kamera foni, tsvaga chitoro chiri padyo kuti utenge kubva… uye nesarudzo huru yemakara akasanganiswa ekurudziro.